FBC - Wal’aansi dhibee onnee (heart attack) dubartootaaf kennamu kan dhiirotaa waliin wal-qixa ta’uu hin-qabu: qorannoo
Wal’aansi dhibee onnee (heart attack) dubartootaaf kennamu kan dhiirotaa waliin wal-qixa ta’uu hin-qabu: qorannoo
Finfinnee, Mudde 30, 2010 (FBC) Dubartoota dhibee onnee qaban muraasa ta’aniif wal’aansi dhiirotaaf kennamu wal-fakkaataan yoo kennameef baay’een isaanii du’aaaf akka saaxilaman qorannoon haaraa mul’iseera.
Qorattoonni ragaa wal’aansaa dhibamtoota onnee waggoota 10 darbanii Siwiidin 180,368 qorataniiru.
Akka argannoo qorannoo isaaniittis dubartoonni dhibee onnee (heart attack) isaan quunname dhiirota caalaa harka sadiin dafanii du’uuf saaxilamoodha, al-takkaa irratti mul’atee jennaan.
Faawundeeshiniin Onnee Biritish akka jedhetti dhibeen onnee yeroo baay’ee akka dhibee dhiirotaa ta’etti ilaalama; haata’u malee, dubartoota kaansarii harmaan du’an caalaa kan dhibee onneen du’antu caala.
Akka argannoo isaaniitti dubartoonni wal’aansa isaanii kennamu (ajajamu) fudhachuurraatti dhadhaboo turani.
Gargaaraan qindeessaa qorannuchaa Piroofeesara Yuunivarsitii Liids Kiriis Gaalee akka jedhanitti hawaasa fi ogeeyyii fayyaa biratti dhibamtoonni onnee maal akka fakkaatanii fi waa’ee isaanii ilaalcha dogoggoraatu jira,
Yeroo baay’ee waa’ee dhibamaa onnee tokko wayita yaadnu, nama umurii giddu galeessaa, ulfina qaamaa gar-malee qabu, dhibee sukkaaraa qabuu fi xuuxu sammuutti nudhufa.
Kun garuu yeroo mara akkana miti; dhibeen onnee dhibee qaamolee hawaasa mara irratti mul’achuu danda’udha, dubartoota dabalatee jedhaniiru.
‘Faawundeeshinii’ Onnee Biritish irraa Piroofeesar Jeremy Piirsan qorannoon kun dhimmichi baay’ee yaachisaa akka ta’e mul’iseera jedhu.
“Haalicha dafanii jijjiiruuf hatattamaan waa’ee dhimmichaa irratti hojii hubannoo qabsiisuu hojjachuu qabna” jedhaniiru.
“Dubartoonni wal’aansa kennamuuf sirriitti akka hordofan gochuun maatiiwwan dhibee kanaan firoottan isaanii akka hin-dhabne gargaaruu dandeenya” jedhaniiru.
Oduuwwan Biroo « Fala funuunaa	Dhiibbaa dhiigaa ittisuuf »